inkqubo ZTF ukwenza - China Shijiazhuang Zhongtai Pipe
I. Yintoni ZTF?
ZTF luhlobo kobugcisa bokwakha eziveliswe Zhongtai Inkampani ngo-2005, nto leyo wendele zobugcisa phambili ukusuka zombini zasekhaya nezamazwe ngamazwe, uze uzuze "Technology Innovation Award" yi China Cold Ndiyila Association Steel.
1) Musa kufuneka utshintshe ababu- kwicandelo nokwaphuka, ukonga iindleko 60% abhaliweyo
2) Uxwebhu ixesha ukutshintsha wagawulwa phantsi kakhulu, akazekeleli icandelo breakdown ukutshintsha ngumngundo nokulinganisa nje kulungile. Kwaye usike-phantsi ukuvelisa ixesha.
3) ngamandla Release zabasebenzi.
4) ULuhlu uyila ubugcisa, ubukhulu yahlukile kwaye lwayo strip sentsimbi X70, N80.
5) zephetshana sobhedu egqwethekileyo yaye beared ngakumbi ngokusezingqondweni, ukunciphisa miri phakathi zephetshana kunye roller, kwaye kananjalo nokunciphisa nkcitho isondo.
6) Kulula ukubuyisela nokulinganisa roller.
II. Kusetyenziswa phi na ZTF?
Rolls kwicandelo umthunyelwa
Sebenzisa Ngokomthetho Common
Sebenzisa Common eliphelele
Ubume kunye Adjustment ye
Ujikeleza Rolls Horizontal
Akukho Rolls Horizontal
Ngesandla ulungise ezijikelezayo, ukuvulwa & wokuvala emcela Inani eliphezulu, abhaliweyo ephantsi evula & yokuvala kwi kwizikhondo. Ngesandla ulungise ukukhululwa ngokukhawuleza okanye amakhuko adjustable.
Zombane nyenyisa ezijikelezayo, ukuvulwa & wokuvala emcela Inani eliphezulu, tilting rolls ephantsi opeing & yokuvala phezu izihlalo kuluhlu. Zombane ukunyenyisa isithuba phakathi kwimiqulu leyo ilawulwa yi Screw.
Zombane nyenyisa ezijikelezayo, ukuvulwa & wokuvala emcela ilisuse aphezulu. Computer ukunyenyisa tilting le kwimiqulu asezantsi evula & yokuvala phezu izitulo kuluhlu, va kwimiqulu leyo ilawulwa iqhosha lemenyu
Ubume kunye Ukulungiswa olujikelezayo nkqo Rolls
Ngesandla ukulawula hlengiso xa kuvulwa & closeing, ephakamisa kwaye ye adlula igophe ekhethekileyo.
Ngesandla okanye electromotion ukulawula hlengiso xa kuvulwa & lokuvala, ephakamisa kwaye ye adlula igophe ekhethekileyo.
ulawulo zombane uhlenga-hlengiso xa kuvulwa & closeing, ephakamisa kwaye ye adlula igophe ekhethekileyo.
Ikhompyutha ukulawula hlengiso xa kuvulwa & closeing, ephakamisa kwaye ye adlula igophe ekhethekileyo.
Adjustment Ezinye Rolls e lwaba Ndiyila Section
Nosaziwayo ziya kutshintshwa xa ukuvelisa ubungakanani entsha ipipi.
Imiqulu vula lize livalwe ngowama shaft, silungise ukukhululwa kugweba abaphilileyo amakhuko adjustable, okukunyusa imiqulu eliphezulu.
Imiqulu vula lize livalwe ngowama shaft okanye umqulu izihlalo, silungise va kwimiqulu leyo ilawulwa yi Screw, kwesiqalekiso imiqulu eliphezulu.
Imiqulu vula lize livalwe ngowama shaft okanye isihlalo roll. Zombane nyenyisa isithuba phakathi kwimiqulu leyo ilawulwa yi Screw. Computer ukunyenyisa ukususwa imiqulu eliphezulu.
Icebo Micro-hlengiso ye Side nkqo Rolls in Final Ndiyila and solinganiso Section
Adjustment ye Rolls Isikhundla
Ukuchaneka Rolls Position Adjustment
Operation Site of Rolls indawo Adjustment
Deformation le Pipe Edge engenanto
Le Formation for High Rrecision, Steel aphakamileyo zithathe iBanga kunye Yangamafu Wall Pipe
Ixesha Ukufaka Rolls
Suppliers welding Machine Pipe Making
cone steel stainless ezenza umatshini lothuli